काठमाडौं - पिसिआर परीक्षण नै नगरी क्वारेन्टिनमा बसेका अधिकांशलाई घर पठाइएको छ । ४० दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बसेकामा लक्षण नदेखिएपछि घर पठाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार बिहीबार मात्र १० हजार २ सय ५३ जना क्वारेन्टिनबाट निस्किएका छन् । उनले भने, ‘कतिपय २८ देखि ४० दिनसम्म पनि क्वारेन्टिनमा बसे । लक्षण नै नदेखिएपछि परीक्षण गरिरहनुपर्दैन ।’
हालसम्म १ लाख ३४ हजार १ सय ५७ जना क्वारेन्टिनबाट बाहिरिएका छन् । सबैभन्दा धेरै २८ जेठ २०७७ मा क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको संख्या १ लाख ७२ हजार २ सय ६६ थियो । बिहीबार क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या ३८ हजार १ सय ९ मा झरेको छ । यसरी हेर्दा १ लाख ३४ हजार १ सय ५७ जना क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकाहरू घर फिर्ता भएको देखिन्छ ।
लक्षण नभएकालाई १४ दिन राखेपछि परीक्षण नगरीकनै पठाइने २० जेठ २०७७ मा जारी गरिएको ‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन कोभिड १९’ मा उल्लेख छ । मापदण्डले क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिमा लक्षण नदेखिए पिसिआर परीक्षण नगर्नू भनेको छ । पछिल्लो एक सातामा दैनिक ५ हजार जना क्वारेन्टिनबाट घर फर्किएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक सातामा दैनिक ५ हजार १ सय ३० जना घर फर्किएका छन् । यसरी हेर्दा एक साताको अवधिमा ३५ हजार १ सय १९ जना घर फर्किएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत शुक्रबार ३ हजार १०, शनिबार ५ हजार ३ सय, आइतबार ३ हजार ९ सय ८१, सोमबार ४ हजार ३ सय ६३ जना क्वारेन्टिनबाट घर गएका हुन् । यस्तै, मंगलबार ४ हजार २ सय ९८, बुधबार ४ हजार ७ सय आठ र बिहीबार १० हजार २ सय ५३ जना क्वारेन्टिनबाट घर फर्किएका छन् । क्वारेन्टिनमा बसकेका व्यक्तिमध्ये अधिकांश भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरू रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । संक्रमितमध्ये ९८ प्रतिशतमा लक्षण नदेखिएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यसैबीच, नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १४ हजार ५ सय १९ पुगेको छ । पछिल्लो एक दिनमा थप ४ सय ७३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या १४ हजार ५ सय १९ पुगेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार थप ६ सय ६४ जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् । योसहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या ५ हजार ३ सय २० पुगेको हो ।
कुल संक्रमितमध्ये ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार हालसम्म देशका सबै जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १० हजार १ सय ६७ जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन् । हालसम्म २ लाख ३७ हजार ७ सय ६४ जनाको आरटी–पिसिआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण भएको छ । याे समाचार अाजकाे राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १९, २०७७ ०३:५९
बुधबार, साउन २८, २०७७ १६:१९ कोरोनाको अर्को नयाँ लक्षण पत्ता लाग्यो
२४ वर्षपछि पक्राउ
लिभरकुसन र बसेल क्वाटरफाइनलमा